Ny ankohonana manaja ireo ray aman-dreny sy ny zokiolona
Ny fahaizana manaja ny zokiolona, na fahaiza-miaina amin'ny ankapobeny dia miainga eo anivon'ny ankohonana. Matoa ny firenena vanona, dia olom-banona no novolavolain'ny fianakaviana, izay fototra iorenan'ny firenena iray, satria ny tsirairay tamintsika dia niainga teo anivon'ny fianakaviana. Ny fianakaviana maromaro miara-monina no nitambatra ho lasa firenena. Na eo aza ny fivoarana entin'ireo teknolojiam-pifandraisana, dia tsy ho entina hampisara-bazana ny ankohonana akory fa tokony hahatonga fihavaozana sy fivelaram-piainana aza izany, ho entina hampandroso ny firenena.
Fampianaran'ny fiangonana : Fampandrosoana maha-olona sy lovain-jafy
Amin'ny maha-reny ny fiangonana dia manabe sy mampita aina ny fiangonana, fa indrindra manoro ny zanany hitory ny Evanjely. Ao amin'ny Laudatu'si dia mirona amin'ny fampandrosoana kokoa ny hafatra ka amin'izany dia hoe : "raha tiana ny hampandrosoana dia omena hasina ny olona tsirairay avy, ary tokony hipaka amin'ny olon-drehetra izany tsy mijery finoana, fiaviana na fahaizana". Farany dia tompon'antoka amin'ny fampandrosoana mba ho lovain-jafy ny olona tsirairay, manaraka ny fampianaran'ny fiangonana miaraka amin'ny fiaraha-monina sy ny fanjakàna.
Pejy 1 amin'ny 20